Iindaba - Imveliso yendalo esingqongileyo
Imveliso yendalo esingqongileyo
Inkampani yethu ibambelela kumxholo wobume bendalo kunye nolondolozo lwezixhobo. Kutshanje imeko yokhuselo lokusingqongileyo imbi, inkampani yethu iyaphendula ngokuqinisekileyo kwaye iqhuba imveliso yokhuselo lokusingqongileyo.
1. Ukuphelisa izixhobo ezingasasebenziyo nokwazisa ngezixhobo ezihambele phambili. Siphelisa izibonelelo eziphelelwe lixesha kwaye sazisa izixhobo eziphambili ngexesha elimiselweyo ukuphucula ukusebenza kwemveliso, ukunciphisa amaxabiso ezinto ezilahliweyo ngaxeshanye kuqonda ungcoliseko olungenanto kunye nokukhutshwa okuncinci kwimveliso.
2. Lungisa iimpahla ukuhlangabezana nomhla ekuvunyelwene ngawo wokuziswa kunye nabathengi ngokuzimisela. Lungisa iimpahla kwangaphambili ii-odolo eziqhelekileyo zokuqinisekisa ukuba izinto zinokufumaneka kubathengisi ngexesha lokuqhubekeka kokusebenza kunye nokudibana, ukuze kuqinisekiswe ukuhanjiswa kwempahla kubathengi kwangexesha.